Conversica: Kpọtụrụ, Tinye, Nzụlite ma tozuo Iji Onye Nyere Aka AI. Martech Zone
Conversica na-enye otu onye na-ere ahịa akpaaka kwadoro site na akụrụngwa ọgụgụ isi. Onye nnyemaaka ahụ na-arụ ọrụ dịka onye inyeaka ahịa mmadụ, na-erute onye ọ bụla n’ime ndu gị ma na-etinye onye ọ bụla n’ime ha na mkparịta ụka mmadụ. Ndị mmadụ hụrụ ya n'anya n'ihi na onye na-enyere aka na-ahụ ihe, na-eme enyi ma na-anabata ya, na-ejikọ ha ngwa ngwa na mmadụ nwere ike inyere aka.
Anyị nọ na mmiri AI. Echere m na maka ụlọ ọrụ ọ bụla, mgbanwe nke sayensị data ga-agbanwe n'ụzọ dị mkpa ka anyị si agba ahịa anyị n'ihi na anyị ga-enwe kọmputa na-enyere anyị aka n'otú anyị na ndị ahịa anyị si emekọrịta ihe. Onye isi ahịa Salesforce Marc Benioff
Onye enyemaka ahụ na-akpọtụrụ ma na-eme ka ndị niile na-eduga ka ndị ahịa wee nwee ike ilekwasị anya n'ire kama ịzụlite. Akpaaka a na - enyere ndu ọ bụla aka ịgbaso na nzaghachi oge weghaara.
Kedu otu onye nnochite anya ire AI na-arụ ọrụ:
Onye inyeaka ahịa gị na akpaghị aka na-etinye onye ahịa ahụ ozugbo ọbịbịa ahụ rutere. Ná nkezi, 35% nke ihe niile na - eduga azịza na onye enyemaka ahịa akpaaka. Onye na-ere ahịa akpaaka ozi ịntanetị azụ na-apụta na ndu, nurturt onye ọ bụla na alerting gị ahịa mkpara mgbe mmasị na-agbanwe na nzube ịzụta.
Onye inyeaka ahịa gị na akpaghị aka chọta nke na-eduga chọrọ oku ma nweta nọmba kacha mma. Na ha akụrụngwa ọgụgụ isi onye enyemaka gị na-ere ahịa na akpaghị aka na-achọpụta ụzọ ndị dị njikere itinye aka na usoro ire ahịa ma nweta nọmba ekwentị kacha mma na oge kachasị mma maka onye na-ere ahịa ịkpọ oku. Ná nkezi, pasent 35 nke ndu na-enye onye enyemaka ahịa akpaaka na nọmba ekwentị ọzọ, ọ na-abụkarị ekwentị. Nke kachasị mkpa, mgbe ndị ọrụ ahịa gị ga-akpọ, ndị isi ga-atụ anya ịkpọ ha.
Onye inyeaka ahịa gị na akpaghị aka itinye aka na ndu ma na-ere. Onye inyeaka ahịa gị na akpaghị aka nwekwara ike ịchọta ohere ahịa ọhụụ ọhụụ na-eduga, na-abawanye ahịa na ịnweta nwekwuo uru site na ndu gị dị ugbu a. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 60% nke ndị ndu teknụzụ AI nke Conversica ka nọ n'ahịa. Enwekwara ike iji onye enyemaka gị na-akwado gị iji gafee-ree ngwaahịa ndị ọzọ ma kpokọta nzaghachi na afọ ojuju ndị ahịa.
Na-ebuli akpaaka ahịa CRM azịza ya. Enwere ike iji onye inyeaka ahịa gị na akpaghị aka iji melite ogo nke ndu na ịchọpụta ohere ahịa site na ndu nke mgbasa ozi ọgbọ na-achọ site na iji ngwa ahịa azụmaahịa dị ka Pardot, Marketo ma ọ bụ Eloqua.
Uru nke onye nnọchi anya ahịa ahịa AI nwere gụnyere:
Hapu ndi ozo ka ha ree ahia - Onye na - ere ahịa akpaaka na - ekewa ihe dị mma na ndị nwụrụ anwụ, yabụ ndị na - ere ahịa na - ekwu naanị maka atụmanya chọrọ ịgwa ha okwu.
Soro usoro ndu ọ bụla - Conversica na-amịpụta karịa na ụsụ maka ndị na - ere ahịa gị - nwere ụzọ ọhụụ na nke ochie - ma si otua na - eme ka ọnụ ọgụgụ ha mechiri emechi n'ụzọ dị egwu.
Nabata nzaghachi n'eziokwu - Onye inyeaka gị dị mfe mbịakwute, na atụmanya na-adị jụụ ma na-akwụwa aka ọtọ na nzaghachi ha karịa ka ha ga - onye na-ere ahia.
Chịkọta ọgụgụ isi azụmahịa - Atụmanya abụghị naanị ịzaghachi ngwa ngwa, ha na-ekerịta ozi dị oke mkpa dịka nọmba ekwentị, oge kachasị mma ịkpọ, yana ebumnuche ịzụta.
Mee ka usoro ahia gị dịkwuo mma - Onye na - enyere gị aka n’ahịa na - esokwa atụmanya ọzọ ka ị nyefechara onye ahịa - iji nyefee nghọta njikwa na afọ ojuju ndị ahịa.
Dunye onye enyemaka ahia zuru oke - Gị ahịa nnyemaaka abịarute n'ụzọ zuru ezu zụrụ azụ, n'ụzọ zuru ezu na-akpali, na-ama onwem na ahụmahụ enwetara site na ọtụtụ nde ndị ahịa mkparịta ụka.
Gbalịa Conversica n'efu Lee Live Conversica Ngosi
Tags: aiai nnyemaakaai virtual nnyemaakaai virtual sales nnyemaakaAmamịghe echicheConversedashboardokwuahịamgbagharamebere nnyemaakannyemaaka ahịa nnyemaakamebere ahịa otu